“Waa Mucaarid aan Qaan-gaadh ahayn, Cida Rifta iyadoo Qaranku ku jiro Xaalad Xasaasi ah” | Somaliland.Org
“Waa Mucaarid aan Qaan-gaadh ahayn, Cida Rifta iyadoo Qaranku ku jiro Xaalad Xasaasi ah”
February 7, 2013	“Wax haliso ay xukuumaddani u Aragto Qarankan kumay iman”
Wasiirka Oo Baabuur Ingiriisku ugu Deeqay Ku Wareejiyay Madaarka Berbera
Berbera (Somaliland.Org)-Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawadda iyo Gaadiidka Cirka Somaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa mucaaridka dalka u soo jeediyay inay noqdaan qaar wax dhisa oo mucaaridadoodu qaan-gaadh tahay.
Wasiirka Duulistu waxa uu sidaasi ka sheegay maanta mar uu masuuliyiinta Madaarka Berbera ku wareejinayay Baabuur xaajiyad ah oo dawladda Ingiriisku ugu deeqday gegadda diyaaraha ee magaalo-xeebeedda Berbera.
Wasiirku waxa uu si adag u difaacay nabad-gelyadda Somaliland, waxaanu xusay inaanay jirin halis dalka ku soo fool ljihi, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Nabad-gelyadeena wax hoos u dhac ahi kuma iman. Wax haliso ay xukuumaddani u aragtana qarankan kumay iman. Taas macnaheedu ma aha inaynu si dhigano. Waynu is diyaarinaynaa cadowgu wuu badan yahay Taxadar badan ayaynu samaynaa heegan adag ayay ciidammadda qaranka oo dhami ku jiraan.”
“ Waxa masuuliyiinteena oo dhami ka shaqaynaa inaynu adkayno nabad-gelyadda iyo inaynu kalsooni siino beesha caalamka,”ayuu yidhi Md. Maxamuud Xaashi
Wasiirka Duulistu waxa uu Hoggo-tusaaleeyay mucaaridka dalka oo uu u soo jeediyay inay noqdaan kuwo wax dhisa, isagoo “Mucaaridka qiimaha lihi waa ka dhiila ee toosiya xukuumadda markay ku haboon tahay, waa ka taageera markay arrin guud ku soo korodho qaranka. Waa mucaaridad aan qaan-gaadh ahayn haddii aad aragto iyadoo qaranku ku jiro xaalad xasaasi ah cida rifta .”
Wasiirku waxa uu uga mahad celiyay dawladda Ingiriiska iskaashiga iyo taageeradda ay siiso Horumarka Somaliland.
Duqa Degmadda Berbera C/Shakuur Maxamuud Xasan (C/Shakuur Cidin) ooxafladaasi ka hadlay ayaa balan qaaday inay dawladda hoose la shaqayn doono madaarka Berbera.
Sidoo kale Badhasaabka Gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi, ayaa isaguna majeertay wax uu ku tilmamaay horumarka laxaadka leh ee ka socda madaarka Berbera oo uu xusay in la gaadh siiyay heerkii caalamiga ahaa. Waxaanu u mahad celiyay Wasiirka Duulista hawadda oo sheegay inay ka go’an tahay casriyaynta Madaarka Berbera.
Maamulaha Madaarka Berbera Cumar Sayid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in baabuurkan ay baahi weyn u qabeen isla markaana uu u dabooli doono hawl-maalmeedkooda iyo adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin. waxaanu ammaan u soo jeediyay dedaaladda uu Wasiirka Duulistu ugu jiro sidii madaarka Berbera dhinac walba looga horumarin lahaa.
Previous PostBoobe Yusuf Ducaalow Tacsidadii Wasiirnimadu Dhamaataye Baroorta Soo Jar Hadaba !Next PostYaman oo Iraan ku eedeysay in ay hubnaynayaan kooxo reer Yaman ah	Blog